အခုအချိန်မှာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးပါကစိတ်ဝင်စား? Micro-volunteers can makeadifference for our organization by completing short tasks without having to complete an orientation to USAHello or background check.
Help build USAHello’s FindHello smartphone app database by adding organizations, အစီအစဉ်များ, နှင့်သင်သည်သင်၏အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာနှင့်အမေရိကန်န်းကျင်ကိုသိအရင်းအမြစ်များကို. သငျသညျပြီးသားအစီအစဉ်များကိုသိမထားဘူးဆိုရင်, ရုံတချို့အင်တာနက်သုတေသနလုပ်နေတာအနည်းငယ်အချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ထမ်းများပြန်လည်သုံးသပ်အားလုံးသော posts. You can add new resources on the online version of the app. Just click on the three horizontal lines in the left-hand corner and select “submit resource.”
USAHello has ongoing research needs to support different sections of our website. သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ဧရိယာ၌ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်သို့မဟုတ်ပဲအင်တာနက်ပေါ်မှာသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေတာမှာတကယ်အကောင်းမှန်လျှင်, consider volunteering for USAHello.
USAHello currently needs translators to help translate key portions of our website, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းနိုင်ငံသားသင်တန်းအပါအဝင်, into newcomer languages.
သင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပုံကိုနောက်ထပ်စိတ်ကူးရှိသည် Do? Submit an application and let us know.
USAHello will work with you to createaposition and set goals for your time with USAHello. USAHello isavolunteer-driven organization and is immensely grateful for the hours and talent they bring. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းလုပ်အားပေးအတွေ့အကြုံတွေကိုဖြည့်ဆည်းကြပါပြီကူညီပေးသည်ကျနော်တို့တွေ့ကြပြီ. Thank you for your desire to work with refugees and to build inclusive, တစ်နိုင်ငံလုံးတက်ကြွအသိုင်းအဝိုင်း.